Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Nooca qasabada musqusha iyo dayactirka qasabada musqusha
2020 / 10 / 26 QoondayntaTilmaamaha qasabada 10964 0
Nooca qasabada musqusha
1: GROHE Qubeyska musqusha
Kooxda Jarmalka ee GROHE waxaa la aasaasay 1936. GROHE Group waxay leedahay qiyaastii 8% saamiga suuqa adduunka waana soo saaraha ugu horreeya ee qalabka musqusha ee Yurub iyo adduunka. Waa badeecad caan ku ah adduunka oo dhan oo alaabooyin iyo nidaamyo nadaafadeed iyo dhoofiso caalami ah.
GROHE wuxuu ku guuleystaa tayadiisa sare, farshaxanimo heer sare ah iyo cilmi baaris iyo horumarin ballaaran. Waxay si guul leh isugu dhafan tahay farsamooyin heer sare ah iyo qaabeyn qumman, waxayna soo bandhigaysaa xarrago iyo soo jiidasho aan dhammaanayn oo ku jirta musqulaha adduunka oo idil.
2: Musqusha Moen
1937, Al Moen wuxuu hormood ka noqday hal-gacan-qabsiga adduunka ee qasabadda biyaha isku dhafka biyaha. Joornaalka caanka ah ee "FORTUNE" ayaa ku taxay Moen hal tuubada biyaha kulul iyo qabow ee ah "mid ka mid ah 100kii alaab ee ugu fiicnaa Mareykanka qarnigii 20aad."
Alaabada taxanaha ah ee Moen waxay leeyihiin noocyo dhameystiran waxayna ku habboon yihiin baahiyaha meelo kala duwan. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa guryaha dhamaadka-sare, hudheelada-dhamaadka sare, villa-yada, guryaha, dhismooyinka xafiisyada ganacsiga iyo dhismooyinka kala duwan ee bulshada Warshadaha qalabka tuubooyinka iyo dadka caadiga ah ee degan Mareykanka iyo Kanada, wax soo saarka Moen si wanaagsan ayey u yaqaanaan dumarka iyo carruurta. Moen® sidoo kale waa caan caan ka ah Waqooyiga Ameerika iyo dadwaynaha oo leh qiime aad u sarreeya. Adduunyada, alaabooyinka Moen waxaa doorbidaya isticmaaleyaasha adduunka oo idil farsamadooda heer sare, farshaxan sare, iyo adeegga iibka kaamil ah, waxayna ku raaxeystaan ​​sumcad sare.
Hansgrohe wuxuu soo saaray ushii ugu horeysay ee kor u qaadida usha qubeyska iyo qubeyska gacanta ee la hagaajin karo, oo loo yaqaan "Hooyada Qubayska Adduunka". In ka badan 300 abaalmarinno naqshad caalami ah ayaa ka dhigay Kooxda Hansgrohe nooca ugu muhiimsan uguna hal-abuurka badan musqusha adduunka maanta.
Hansgrohe waxaa ka go'an soo saarista qubaysyada, qasabadaha iyo qalab qubeys buuxa, wuxuuna u heellan yahay abuurista meel diiran oo raaxo leh guud ahaan musqusha macaamiisha.
Dayactirka qasabada musqusha
1. Fadlan khibrad u leh xirfadlayaal aqoon u leh rakibaadda. Marka la rakibayo, qasabadu waa inay isku daydaa inaysan ku dhicin walxaha adag, hana kaga tagin sibidhka, koolada, iwm dusha sare, si aysan u dhaawicin dhalaalka dusha sare ee dusha sare. Haddii qasabadaada loo adeegsado guri cusub oo la dhisay, maxaa yeelay shabakada tuubbada biyaha siiso cusub ayaa laamiyay, waxaa hubaal ah inay jiri doonaan wasakh sida ciidda biyaha. Kahor rakibida, fadlan fiiro gaar ah si aad qashinka uga saarto dhuumaha, una sii daa biyaha muddo dheer ilaa inta tayada biyuhu ka cadaanayaan ka hor inta aan la rakibin qasabadda.
2. Ha u isticmaalin xoog xad-dhaaf ah inaad ku keento dhaawac macmal ah markaad furayso iyo markaad isticmaaleyso, si tartiib ah u rogo Xitaa tuubada dhaqameed uma baahna in lagu jaro dadaal xoog leh.
3. Dusha sare ee qasabadda waa in la tirtiraa nadiifinta ka dib isticmaalka caadiga ah. Ha u isticmaalin mashiinka qasabada qasac gacan qaad si aad u taageerto ama u isticmaasho.
4. Marka cadaadiska biyuhu aanu ka yarayn 0.02mpa, mudo isticmaal kadib, hadii la ogaado in soosaarka biyuhu hoos u dhacayo, ama xataa kuleyliyaha biyaha la xidho, jooji socodka qabowga iyo biyaha kulul, isticmaalna a fure si tartiib ah looga furo mashiinka biyaha ee tubada biyaha ee tuubada Daboolka shaashadda, ka dib nadiifinta waxyaabaha nijaasta ah, si taxaddar leh u rakib, guud ahaanna wuu u soo kaban doonaa sidii hore.
5. Tuubada birta ah ee madaxa qubeyska tubbada tubbada waa in lagu hayaa xaalad dabiici ah oo fidsan, hana ku xidhin qasabadda marka aan la isticmaalin. Isla mar ahaantaana, marka la isticmaalayo ama aan la isticmaalin, ka taxaddar inaad sameysid xagal dhinta wadajirka u dhexeeya tuubbada iyo jirka waalka, si aadan u jabin ama u dhaawacin tuubada.
Hore:: Dib-u-eegista Faucets Delta: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021 ee Buuxiyeyaasha Dheriga Next: Xullo qasabad biyo-badbaadin ah oo shaqooyin badan qabata oo la jaanqaadaysa heerarka nolosha casriga ah
2021 / 02 / 03 3914
2021 / 01 / 28 2730
2021 / 01 / 28 1865
2021 / 01 / 28 3121